सावधान ! फेसबुकबाट फैलँदै छ भाइरस ( बच्ने तरिका सहित ) – Satya Samachar
Home/ बिज्ञान प्रबिधि/सावधान ! फेसबुकबाट फैलँदै छ भाइरस ( बच्ने तरिका सहित )
सावधान ! फेसबुकबाट फैलँदै छ भाइरस ( बच्ने तरिका सहित )
सावधान ! फेसबुकबाट फैलँदै छ भाइरस ( बच्ने तरिका सहित )काठमाडौँ, वैशाख ८ गते । फेसबुक, म्यासेन्जर वा वालमा तपाईंको नाम जोडिएर कुनै भिडियो लिङ्क र पोष्ट देख्नुभयो ? यस्तो भिडियोरूपी भाइरस केही दिन यता फेसबुकमा फैलिरहेको छ ।
फेसबुकमा यस्ता लिङ्क देख्नुभएमा ख्याल गर्नु है, यस्ता लिङ्क असुरक्षित हुन सक्छन् । सामाजिक सञ्जालमा ह्याकरले फिसिङ, ह्याकिङ वा भाइरस फैलाउने उद्देश्यले यस्ता लिङ्क पठाउने गरेका छन् ।
यदि तपाईंको फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालका एकाउन्टमा यस्ता गतिविधि देख्नुभयो भने त्यस्ता लिङ्क क्लिक नगर्नुहोस् । यस्ता लिङ्क क्लिक गर्दा तपाईंको फेसबुक, ट्वीटरलगायतका एकाउन्ट ह्याक हुन सक्छन् ।
निम्न सुरक्षाका उपाय अपनाउनुहोस् १) फेसबुकमा आउने यस्ता शङ्कास्पद लिङ्क वा भिडियो लिङ्क क्लिक नगर्ने ल२) मोबाइल, ट्याबलेट, ल्यापटपलगायतका डिभाइसमा एन्टिभाइरस राख्ने । ३) फेसबुकमा आएका लिङ्कबाट अनलाइन फाराम नभर्ने । अनलाइन फाराम भर्नुपरेमा आधिकारिक वेबसाइटमा गएर मात्र भर्ने ।
४) फेसबुकमा देखिने सामग्री आफूलाई शङ्कास्पद लागेमा रिपोर्ट गर्ने ।५) नियमित रूपमा फेसबुकको पासवर्ड परिवर्तन गर्ने ।६) फेसबुकमा प्रयोग हुने एपहरूको प्रयोग गर्दा सजग हुने । फेसबुकमा भविष्य बताउने, जोडी मिलाउने, व्यक्तित्व बताउने लगायतका विभिन्न एप उपलब्ध हुन्छन्, यी सबै एप सुरक्षित नहुन सक्छन् ।
द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा अब देशैभर, दुई वर्षसम्मलाई निःशुल्क
भर्खरै नेपालीलाई खुशी थपियो , कुलमानले गरे अर्को घोषणा
‘सुनौलो–सुन्तला कोष’ भएको केरा फलाउन वैज्ञानिक सफल, लाखौँ मानिसको जीवन बच्ने